မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-01 > စိတ်ဝိညာဉ်များအတွက် Antihistamine
ခရစ်ယာန်အချို့သည်“ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်” ကိုမည်သို့တုံ့ပြန်ကြကြောင်းသင်သတိပြုမိပါသလား။ သူမ၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးလွှတ်ကြောများသည်ကျဉ်းမြောင်းနေပြီးသူမ၏ ဦး နှောက်သည်အအေးမိနေသည်။ အတွေးတိုင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ ဤတုံ့ပြန်မှု၏အကြောင်းရင်းမှာခရစ်ယာန်များစွာအတွက်ယေရှု၏အသက်တာသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အဆုံးသတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာသူတို့သည်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်းကြားကာလကိုပcovenantိညာဉ်အဟောင်းနှင့်ပညတ်တရား၏ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ သို့သော်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းသည်အဆုံးမဟုတ်ဘဲအစမျှသာဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူ့အလုပ်အတွက်အလှည့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းကိုငါတို့နှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆရာများသည်လူများစွာသည်ရွှံ့ထဲရှိကားတစ်စီးကဲ့သို့မိမိတို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသူတို့၏ဘ ၀ များသည်ယုံကြည်ခြင်း၌ဆက်လက်မတည်ရှိနိုင်သည့်ပြproblemနာကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သင်သည်ခရစ်တော်နှင့်ဘဝမည်သို့ရှိသင့်သည်ဟူသောဆံပင်ဖြူသောအတွေးအခေါ်များကိုသင်လိုက်လျှောက်သည်။ ဤဘဝသည် music ၀ ံဂေလိဂီတဖြင့်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ သူတို့ဘဝအဆုံးသတ် - သူတို့ထင်သည် - သူတို့သည်ကောင်းကင်သို့သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းထိုတွင်သူတို့ဘာလုပ်မလဲမသိ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုမမှားပါစေနဲ့။ ကျွန်ုပ်သည် music ၀ ံဂေလိဂီတ၊ ခရစ်ယာန်စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ သို့သော်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်အတွက်ပင်အစမျှသာဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါကငါတို့အတွက်ဘ ၀ သစ်တစ်ခုရဲ့အစဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အတွက်ကတော့အဲဒါကငါတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးအသစ်ရဲ့အစပဲ!
Thomas F. Torrance သည်ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူသည်သိပ္ပံပညာအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူဖခင်များကိုအလွန်တန်ဖိုးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်ရှာဖွေရေးတွင်ဘုရား၏သွန်သင်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအပေါ်ဂရိအယူမှားဝါဒ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝနှင့်ဘုရားသခင့်လုပ်ဆောင်မှုကို ခွဲခြား၍ မရပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမှုန်များနှင့်လှိုင်းများဖြစ်သောအလင်းကဲ့သို့ပင်ဘုရားသခင်သည်အပိုင်းသုံးပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့ကို“ မင်း” ဟုခေါ်သည့်အခါတိုင်းသူ၏သဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်တို့သက်သေခံပြီး၊ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောတိုင်းသူ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသက်သေခံသည်။
သူ၏အစ်ကိုသောမတ်စ်နောက်မှဂျိမ်းစ်ဘီတိုရန်ကစာချုပ်နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုအကြားခြားနားချက်ကိုရှင်းပြသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏မဟာမိတ်များကိုနားလည်ရန်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဂျိမ်းဘုရင်ဘာသာပြန်ကျမ်းထက်ဘုရားကျောင်း၏သင်ကြားမှုတွင်ပိုမိုသြဇာညောင်းသောလက်တင်ဘာသာပြန်ကျမ်းသည်စာချုပ်အတွက်လက်တင်စကားလုံးကိုသုံးသောအခါပြtheနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စာချုပ်တစ်ခုတွင်အချို့သောအခြေအနေများရှိပြီးအခြေအနေအားလုံးသည်ပြည့်စုံမှသာစာချုပ်ကိုပြည့်စုံစေသည်။
Ein Bund jedoch ist nicht an bestimmte Bedingungen gebunden. Er hat allerdings bestimmte Verpflichtungen. Jede Person, die heiratet, weiss, dass das Le ben nach dem Jawort nicht mehr das gleiche ist. Teilhabe und Teilnahme sind Grundpfeiler eines Bundes. Ein Ver trag kann das alleinige Treffen und Austragen von Entscheidungen beinhalten, aber ein Bund benötigt eine Zusage beider Parteien, damit er zustande kommt. So ist es auch mit dem neuen Bund, der durch das Blut Jesu entstanden ist. Wenn wir mit ihm sterben, sind wir auch mit ihm als neuer Mensch auferstanden. Mehr noch: Diese neuen Menschen sind mit Jesus in den Himmel aufgefahren und thronen mit ihm zur rechten Hand Gottes (Epheser 2,6; ကောလောသဲမြို့ 3,1). Warum? Zu unserem Nutzen? Nein, nicht wirklich. Der Nutzen, der jedem von uns dadurch entsteht, ist abhängig von Gottes Plan, die ganze Schöpfung mit ihm zu vereinen. (Dieses könnte eine weitere allergische Reaktion hervorrufen. Schlage ich etwa Universalismus vor? Nein, sicher nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.) Es gibt nichts, was wir tun können, um Gottes Liebe, die durch die Gnade der Erlösung ausgedrückt wird, zu verdieErlösung ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang nen. Paulus betont das unter anderem in Epheser 2,8-10. Alles, was wir vor unserer Erlösung getan haben, bewusst oder unbewusst, hat die Notwendigkeit Gottes unverdienter Gnade unentbehrlich gemacht. Aber, wenn wir einmal diese Gnade an genommen haben und Teil von Jesu Geburt, Leben, Folter und Kreuzestod geworden sind, sind wir auch Teil seiner Auferstehung, dem neuen Leben in und mit ihm, geworden.
အခုတော့ငါတို့အနားမှာရပ်ပြီးကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ သူ၏ ၀ ိညာဉ်တော်ကယေရှု၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လူသားများအတွက်သူ၏“ ပရောဂျက်” ပြီးစီးမည်။ သခင်ယေရှု၌ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိခံယူခြင်းသည်လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရုံသာမကကမ္ဘာပေါ်၌သူနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဆန္ဒရှိသည်။ တခါတရံတွင်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီးလူများနှင့်အုပ်စုများကိုကြာရှည်စွာစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကိုပင်မတားဆီးနိုင်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကဘာကောင်းတယ်၊ လက်ခံနိုင်သလဲ၊ ဘာအန္တရာယ်လဲဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကမသိတော့တဲ့အခါမှာတော့တိုက်ထုတ်ရမယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရောဂါပျောက်ကင်းမြန်ဆန်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။ ငါ့သမီးကပူဖောင်းတစ်လုံးလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်
အဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူမဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်သတိမပြုမိခဲ့တာပဲ။ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များနှင့်နက်ရှိုင်းစွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အားသတိပြုမိသည်။ အကယ်၍ သူသည်သန့်ရှင်းဖြူစင်သောအဖြူရောင်အလင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သို့ထွန်းလင်းစေပါကအရာရာတိုင်းရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့အရင်နှင့်မတူပါ။
Nicea ၏ Creed
အရာရာကို၊ ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မျက်မြင်ရနှင့်မျက်မြင်မရသောကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောခမည်းတော်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်၊ အချိန်ကာလမတိုင်မီကဖွားမြင်တော်မူသောသခင်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှအလင်း၊ အလင်းမှအလင်း၊ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ထံမှစစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိခြင်း၊ သူ့အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ငါတို့လူသားများနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သူသည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာသည်၊ အပျိုစင်မာရိထံမှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသားဖြစ်လာပြီးလူသားဖြစ်လာသည်။ သူသည်ပုန္တိပိလတ်မင်းလက်ထက်၌ငါတို့အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံပြီ။ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသည်။ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီ။ သူသည်ခမည်းတော်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်။ အသက်ရှင်သူနှင့်သေလွန်သူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုန်းတော်နှင့်တဖန်ကြွလာတော်မူမည်။ သူ၏အာဏာလည်းမတည်ရ။ သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်၊ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်မှဆင်းသက်လာ။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်နှင့်အတူမြတ်နိုးကြည်ညိုလေးမြတ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ပရောဖက်များနှင့်သန့်ရှင်းသူ၊ ကက်သလစ် ၁ နှင့်တမန်တော်များမှတစ်ဆင့်ပြောဆိုသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအတွက်နှစ်ခြင်းခံခြင်းကိုဝန်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေလွန်သူများရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်လာမည့်ကမ္ဘာ၏ဘဝကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။
Elmar Roberg ကပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်